Somaliland: Dawladda Djibouti Oo Qiratay Inay Ku Xadgudubtay kuna Dagaalantay Gudaha Badda Somaliland Xaalna Ka Bixisay Dhacdadaas. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Dawladda Djibouti Oo Qiratay Inay Ku Xadgudubtay kuna Dagaalantay Gudaha Badda...
Shirar googoosa oo muddo sadex cisho ah qaatay oo la iskugu gar dhiganayey kadib waxaa labada dawladood ee Somaliland iyo Jabuuti ay maanta isla qaateen heshiis laba dhinaca kaasi oo dawlada jabuuti ku qiratay khaladkeedee gardarada ahaa ee ay ku qaaday ciidamada badda Somaliland oo ku sugan xuduuda badooda.
Dawlada jabuutii oo hore u dafirtay inay gaf ka gashay Somaliland ayaa kadib markii la isla eegay halka ay ku weerareen ciidamada somalilan ayaa ay qirteen inay ku xad gudbeen biyaha Somaliland .
Sidoo kale dawlada jabuuti waxaa ay dhabarka u ridatay dhimashadii iyo dhamaanba khasaarihii halkaasi ka dhashay iyada oo xaalna kabixisay xad gudubka ay ku kaceen ciidamadoodu.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland mudane cali warancadde oo hogaaminaya waftida dhinaca Somaliland ka socota ayaa si adag ula hadlay masuuliyiinta dawlada jabuuti intii ay socdeen shirar doceedyada garnaqsigu.
Shirkan heshiiska labada dhinac ayaa maanta ka qabsoomay xarrunta ciidanka bada ee Jabuuti halkaasi oo dawlada jabuuti uu matalayey wasiirka kaluumaysida maxamed Somali iyo taliyaha ciidamada bada cabdiraxmaan shiir.
Dhinaca Somaliland-na waxaa hogaaminaayey Wasiirka
Arrimah gudaha mudane cali maxamed warancadde, wasiirka kalluumaysida cali buured taliyaha ciidamada badda maxamed xuseen xiirane safiirka Somaliland u fadhiyada jabuuti afayeenka wasaarada arrimaha gudaha iyo taliyaha aaga galbeed ee ciidamada badda.
Shirkani oo warbaahintu dabada ka jiigtay ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland mudane cali warancade ,wasiirada Kalluumaysida ee jabuti iyo Somaliland
Waxaana heshiiska ka sokow ay sheegen in la samayn doono guddi laba dhinaca oo ka shaqayn doonta xidhiidhka saaxiibtinimo ee labada dal.